‘नेपाल आइडल सिजन ३’को फाइनल भदौ १२ गते हुँदै, को होलान् विजेता ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/‘नेपाल आइडल सिजन ३’को फाइनल भदौ १२ गते हुँदै, को होलान् विजेता ?
साङ्गीतिक रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’ को सिजन ३ को फाइनल नजिकै आएको छ । कोरोना महामारीले गर्दा रोकिएको नेपाल आइडलको तेस्रो सिजनको लागी उत्कृष्ट ३ प्रतिस्पर्धी छानिएका छन् ।
झन्डै ८ महिना अघि सुरु भएको नेपाल आइडल सिजन ३ ले गत चैत्र महिनामा नै आफ्नो नयाँ आइडल पाइसक्नु पर्ने हो तर जारी गरिएको लकडाउन र कोरोना महामारीको कारण कार्यक्रम नै स्थगित भएको थियो ।
‘ए मेरो हजुर ४’ को शो खुल्यो, अब टिकेट किन्न सकिने